Zụrụ Ndị Na-eso Egwuregwu Spotify Playlist - SoNuker
Olee uru m ga-ahụ ma ọ bụrụ na m zụrụ ndị na-eso ụzọ Soro Spotify Playlist?
Kedu ihe kpatara m ga-eji zụta ndị na-eso ụzọ egwu Spotify Playlist?
Ndị na-eso ụzọ na profaịlụ gị bụ otu n'ime ihe mbụ ndị ọbịa na profaịlụ gị na-ele. O nwere ike ime ka ha kpebie ozugbo ma ebe ahụ isoro gị ma ọ bụ lelee profaịlụ gị. Nnyocha egosiwo na mgbe inwetakwu ndị na-eso ụzọ, mmasị, echiche na echiche ị nwere ike ịnweta ndị na-eso ụzọ ọhụrụ. Site na Spotify na - emelite ma ọ bụ na - agbanwe algọridim ha ọ na - esiwanye ike wuo akaụntụ gị.
You zụta ndị na-eso ụzọ Spotify Playlist site n'aka ndị nwere aha ọma dị ka anyị ọ na-enye profaịlụ Spotify gị n'ọsọ asọmpi ọ ga-ahụ anya ma nwee mgbanwe dị elu nke ịmepụta mmetụta nje ma ọ bụ iwulite ihe ọkụkụ.
Kedu mgbe a ga-anapụta Ndị Na-eso Egwuregwu My Spotify?
Agbakwunyere ndị na-eso ụzọ Playlist na ndepụta gị.
Ndị na-eso 100 ($ 20) Ndị na-eso 250 ($ 35) Ndị na-eso 500 ($ 60) Ndị na-eso 1000 ($ 100) Ndị na-eso 2500 ($ 180) Ndị na-eso 5000 ($ 300) Ndị na-eso 10000 ($ 500) Ndị na-eso 15000 ($ 700)
Egwuregwu 1000 ($ 45) Egwuregwu 2000 ($ 80) Egwuregwu 5000 ($ 150) Egwuregwu 10000 ($ 275) Egwuregwu 20000 ($ 500) Egwuregwu 50000 ($ 900)
Ndị na-eso 100 ($ 15) Ndị na-eso 250 ($ 25) Ndị na-eso 500 ($ 45) Ndị na-eso 1000 ($ 80) Ndị na-eso 2500 ($ 160) Ndị na-eso 5000 ($ 300) Ndị na-eso 10000 ($ 550)